Agaasimaha Madaxtooyada: “DFS mar walba diyaar bay u tahay in ay la kulanto madaxda Somaliland si dalka oo dhan looga hirgaliyo dib-u-heshiisiin dhab ah” (dhegayso) – Radio Daljir
Febraayo 20, 2019 9:40 g 0
Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada Soomaaliya Md. Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa wareysi uu caawa siiyey Radio Daljir waxa uu ku beeniyey warar si weyn loogu hadal hayey baraha bulshada oo sheegayey in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u socdo Addis Ababa si uu halkaas ugula kulmo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Agaasimaha ayaa taas baddalkeeda sheegay in DFS ay mar walba diyaar u tahay in ay la kulanto madaxda Somaliland si dalka oo dhan looga hirgaliyo dib-u-heshiisiin dhab ah.
Docda kalena, Agaasimaha ayaa ka hadlay waxa ay ku qotomeen safaradii Madaxweynuhu kaga soo laabtay dalalka Burundi iyo Djibouti, oo labaduba kamid ah dalalka ay Soomaaliya ciidamadu ka joogaan, halka uu marayo qorshihii dowladdu ku doonaysay in ay kula wareegto amniga dalka, waxa ka jira wararka sheegaya in xiisadda dhanka xudduudda ah ee Soomaaliya iyo Kenya ay saamaysay ciidamada Kenya ee nabad-ilaalinta u jooga iyo amuuro kale.
Md. Cabdinuur Maxamed Axmed oo Madaxweynaha socdaaladaas ku weheliyey ayaa u warramay Axmed Sh. Maxmed (Tallman) oo ku sugan xarunta Daljir ee Bossaso.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 422 Wararka 14340